Ngwọta - Tanzania Crusher
Ngwongwo uru bara uru
edemede si: ngwọta | | oge: August, 2013 | mkpado: ngwọta
Ngalaba na-enweta uru nke osisi Mgbe a gbasasịrị mgbatị, ụzọ nchịkọta nke ihe nchịkọta na-agụnye ihe ndekọ log, nnukwu ndị na-arụ ọrụ mgbasa ozi dị arọ, na igwe nri. A na-ejikarị log log eji eme ihe na mmiri iji mee ka mmiri na ụrọ na ụrọ na-adịghị mma na nchịkọta. Ọ nwere ike ịdị mkpa ka onye na-emepụta ihe na-emepụta ihe dị na ya ma ọ bụrụ na ị na-ehichapụ ihu na-ewepụghị iwu ndị a na-adịghị mma. Nkewa mgbasa ozi dị egwu dị oke ọnụ, ma ọ bụ naanị otu ụzọ dị mma maka onye na-emepụta ihe ... GỤKWUO...
Usoro nchịkọta anụ ọkụkọ
Usoro nchịkọta nke ihe nchịkọta nke nchịkọta Nchịkọta nchịkọta bụ nzọụkwụ mbụ nke nhazi amalite mgbe mwepụsịrị si na-agba ma ọ bụ olulu. Akpa nke kachasị arụ ọrụ bụ Mbelata na oke site na-etipịa. N'ime osisi a na-agba ahịhịa na-agụnye nsị, Nchacha na osisi Scalping a na-emepụta ihe na-ejikarị eme ihe iji gbanwee ụcha na kpụpị ụkwụ iji mee ka mma nsị. Na nchịkọta scalping usoro, akụkụ dị oke nkata na-echi ọnụ n'ala wee recombined wi ... GỤKWUO...
Usoro nchịkọta nchịkọta maka mmepụta osisi
Usoro ntinye nchịkọta maka mmepụta osisi Usoro ntinye nchịkọta gụnyere nkwụsị, nsị na breeze, na ụda nkume ma ọ bụ ịpụtụ ihe. Ugbu a, gwa gị Olee otú ihe dị iche iche na-eme si emetụta àgwà ha. Iberibe na usoro mmịpụta nchịkọta Dị ka nzọụkwụ mbụ, a chọrọ Onye Na-emepụta ka ịpụta usoro nkowa zuru ezu maka ego ọ bụla a na-akwụ ụgwọ. Na usoro mmepụta ihe, mkpịsị aka na ịda mbà n'obi n'elu ihe nkwụnye ego ... GỤKWUO...
Mbibi nchịkọta anụ ọkụkụ
A na-ejikarị mkpokọta nchịkọta anụ ọkụkụ na-emepụta ihe ọkụkụ na-emepụta ihe ọkụkụ. E nwere ike iji kpochapia ihe na-eme ka usoro nchikota nchikota nke isi, nke abuo na nke di elu. Ụdị nchịkọta nchịkọta nchịkọta nchịkọta Mpempe akwụkwọ nchịkọta mkpokọta nwere ihe nkedo, oghere vetikal, na hammermill impactors. Ndị gwakọtara nchịkọta ihe nchịkọta ndị nwere nchịkọta nwere otu ma ọ bụ okpukpu abụọ, nke nwere ike iji aka ike na-ejide ihe dị ukwuu. Nnukwu kehora ... GỤKWUO...
Nchịkọta nhazi usoro nhazi osisi
Nchịkọta nhazi nke ihe nchịkọta nke nchịkọta akwụkwọ nchịkọta nchịkọta na-agụnye mmịpụta, nbibi, ntinye uru, nyocha, nchịkọta, nchịkọta na nchịkwa. Nchịkọta usoro nhazi usoro nhazi site na ntinye site na nhazi. Nhazi na-emetụta àgwà ịnweta ma na-eguzosi ike n'ezi ihe, nchịkọta anụ ahụ, nakwa, karịsịa, gradation (nchịkwa nchịkwa). Ntughari na ngalaba nhazi nhazi: Ntughari ntinye na Nchikota nke mmeputa gunyere iberibe, nyochaa a ... GỤKWUO...